Ururka Haweenka G/Banaadir oo deeq lacag ah u qeybiyay Ciidamada Xasilinta Caasimadda – Radio Muqdisho
Lacago ay iska soo uruuriyeen Haweenka Gobolka Banaadir ayaa xalay waxaa dhiira gelin looga dhigay Ciidamada ilaalinta magaalada Muqdisho,iyadoo mas’uuliyiin ka socota Haweenka Gobolka Banaadir socdaal ku soo maray qaar ka mid ah Isgoysyada magaalada Muqdisho.
Isgoysyada Haweenka Gobolka Banaadir ay xalay soo mareen waxaa ka mid ah Balaagsii,Baar ubax,Bakaaraha,Tarabuunka,Soobe,Numbar 4 iyo kuwa kale oo ay Ciidamada qaabilsan nabad galyada Muqdisho ay ku sugnaayeen.
Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir,Jawaahir Barqab oo ay wehlinayeen Guddoomiyeyaasha Haweenka 17-ka degmo ee Gobolka Banaadir ayaa sheegtay in deeqda lacagta ah ugu talagaleen iney ku dhiira geliyaan Ciidanka heeganka ku ah shaqada iyo iney dareesiiyaan iney la qeybsanayaan dhaxanta ay u joogaan difaaca shacabka Gobolka Banaadir.
Sidoo kale,Jawaahir Barqab ayaa sheegtay in astaanka Qaranka ugu horeeyaan Ciidamada loona baahan yahay in mar waliba laga war hayo.
Ciidamada xasilinta magaalada Muqdisho ayaa dadaal badan geliyay sidii shacabka Muqdisho ugu noolaan lahaayeen deganaasho iyo iney ka hortagaan kooxaha nabad diidka ee caadeystay iney dhiiga shacabka si fudud ku daadiyaan.
Dawlada Qadar oo Sheegtay in ay soo Iibsan doonto Diyaarado Dagaalka: